ဂဏ္ဍသုတ္တံ (အနာဝ ကိုးပေါက် – အသုဘ) – ဝင်းမေတ္တာ
June 4, 2021 February 26, 2022 / တရားဓမ္မ
ဤခန္ဓာကိုယ်ကို မစွဲလမ်းသင့်သော အချက် ၉ ချက်။
ဂဏ္ဍသုတ္တံ | သီဟနာဒဝဂ္ဂေါ | နဝကနိပာတပာဠိ | အင်္ဂုတ္တရနိကာယ | သုတ္တပိဋက
၁၅. ‘‘သေယျထာပိ၊ ဘိက္ခဝေ၊ ဂဏ္ဍော အနေကဝဿဂဏိကော။ တဿဿု ဂဏ္ဍဿ နဝ ဝဏမုခါနိ နဝ အဘေဒနမုခါနိ။ တတော ယံ ကိဉ္စိ ပဂ္ဃရေယျ – အသုစိယေဝ ပဂ္ဃရေယျ၊ ဒုဂ္ဂန္ဓံယေဝ ပဂ္ဃရေယျ၊ ဇေဂုစ္ဆိယံယေဝ [ဇေဂုစ္ဆိယေဝ (က.)] ပဂ္ဃရေယျ; ယံ ကိဉ္စိ ပသဝေယျ – အသုစိယေဝ ပသဝေယျ၊ ဒုဂ္ဂန္ဓံယေဝ ပသဝေယျ၊ ဇေဂုစ္ဆိယံယေဝ ပသဝေယျ။
‘‘ဂဏ္ဍောတိ ခေါ၊ ဘိက္ခဝေ၊ ဣမဿေတံ စာတုမဟာဘူတိကဿ [စာတုမ္မဟာဘူတိကဿ (သီ. သျာ. ပီ.)] ကာယဿ အဓိဝစနံ မာတာပေတ္တိကသမ္ဘဝဿ ဩဒနကုမ္မာသူပစယဿ အနိစ္စုစ္ဆာဒနပရိမဒ္ဒနဘေဒနဝိဒ္ဓံသနဓမ္မဿ။ တဿဿု ဂဏ္ဍဿ နဝ ဝဏမုခါနိ နဝ အဘေဒနမုခါနိ။ တတော ယံ ကိဉ္စိ ပဂ္ဃရတိ – အသုစိယေဝ ပဂ္ဃရတိ၊ ဒုဂ္ဂန္ဓံယေဝ ပဂ္ဃရတိ၊ ဇေဂုစ္ဆိယံယေဝ ပဂ္ဃရတိ; ယံ ကိဉ္စိ ပသဝတိ – အသုစိယေဝ ပသဝတိ၊ ဒုဂ္ဂန္ဓံယေဝ ပသဝတိ၊ ဇေဂုစ္ဆိယံယေဝ ပသဝတိ။ တသ္မာတိဟ၊ ဘိက္ခဝေ၊ ဣမသ္မိံ ကာယေ နိဗ္ဗိန္ဒထာ’’တိ။ ပဉ္စမံ။
၁၅။ ရဟန်းတို့ ဥပမာသော်ကား နှစ်အရေအတွက် များစွာကြာမြင့်သော အိုင်းအမာ ‘အနာ’ သည် (ရှိရာ၏)၊ ထိုအိုင်းအမာအား မည်သူကမျှ ဖောက်ခွဲ၍ ပြုရသည်မဟုတ်ကုန်သော အပေါက်ဝကိုးခုဟူသော အနာဝ ကိုးပေါက်တို့သည် ရှိကုန်ရာ၏၊ ထိုအနာဝ ကိုးပေါက်တို့မှ တစ်စုံတစ်ရာယိုကျပါမူ မစင်ကြယ်သော အရာသာ ယိုကျရာ၏၊ မကောင်းသော အနံ့သာ ယိုကျရာ၏၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော အရာသာ ယိုကျ ရာ၏၊ တစ်စုံတစ်ရာ ပွါးစီးပါမူ မစင်ကြယ်သော အရာသာ ပွါးစီးရာ၏၊ မကောင်းသော အနံ့သာ ပွါးစီး ရာ၏၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော အရာသာ ပွါးစီးရာ၏။
ရဟန်းတို့ “အိုင်းအမာ”ဟူသော ဤအမည်သည် မိဘတို့၏ သုက်သွေးကြောင့်ဖြစ်သော၊ ထမင်း မုန့်တို့ဖြင့် ကြီးပွါးစေအပ်သော၊ မမြဲခြင်းသဘော နံ့သာပျောင်းတို့ဖြင့် ပွတ်သပ်ပေးရခြင်းသဘော၊ ဆုပ်နယ်ပေးရခြင်းသဘော၊ ပြိုကွဲပျက်စီးခြင်းသဘောရှိသော၊ မဟာဘုတ်လေးပါးတို့ဖြင့်ပြီးသော ဤခန္ဓာ ကိုယ်၏ အမည်တည်း။ ထိုခန္ဓာကိုယ် အိုင်းအမာအား မည်သူကမျှ ဖောက်ခွဲ၍ ပြုရသည် မဟုတ်ကုန်သော အပေါက်ဝကိုးခုဟူသော အနာဝ ကိုးပေါက်တို့သည် ရှိကုန်ရာ၏၊ ထိုအနာဝကိုးပေါက်တို့မှ တစ်စုံတစ်ရာ ယိုကျပါမူ မစင်ကြယ်သော အရာသာ ယိုကျရာ၏၊ မကောင်းသော အနံ့သာ ယိုကျရာ၏၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော အရာသာ ယိုကျရာ၏၊ တစ်စုံတစ်ရာ ပွါးစီးပါမူ မစင်ကြယ်သော အရာသာ ပွါးစီးရာ၏၊ မကောင်းသော အနံ့သာ ပွါးစီးရာ၏၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်သော အရာသာ ပွါးစီးရာ၏။ ရဟန်းတို့ ထို့ကြောင့် ဤ (ခန္ဓာ)ကိုယ်၌ ငြီးငွေ့ကြကုန်လော့ဟု (မိန့်တော်မူ၏)။
9.15. A Boil
အမှန်မှာ နှစ်ဖြာကွဲ့ ရုပ်နာမ်တရား၊
ဥပါဒ်, ဌီ, ဘင်နဲ့၊
မြဲနေစဉ် ဖြစ်, တည်, ပျက်ဟာမို့၊